Ikhabethe lika-"Tío Chomo" eJuayúa - I-Airbnb
Ikhabethe lika-"Tío Chomo" eJuayúa
Juayúa, Sonsonate, i-El Salvador
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Marcela
Ikhabethe elinethezekile elinombono omuhle ezintabeni zaseJuayúa, eSonsonate. Indawo ekahle yokubalekela inkambiso yedolobha nendawo ephephile yezilwane ezifuywayo. Ikhabethe lisendaweni yangasese imizuzu emi-3 ukusuka edolobheni laseJuayúa.
Ikhabethe elinethezekile elinombono omuhle ezintabeni zaseJuayua, eSonsonate. Indawo ekahle yokubalekela indlela yedolobha kanye nendawo ephephile yezilwane ezifuywayo. Ikhabethe lisendaweni yangasese imizuzu emi-3 ukusuka edolobheni laseJuayua.
Ikhabhinethi isendaweni yangasese eJuayúa, eSonsonate, ngaphakathi kwepulazi, imizuzu emi-3 ukusuka edolobheni. Ikhabethe linemibhede yezindlovukazi ezimbili, igumbi lokugezela elinamanzi ashisayo, i-wifi, ikhishi, ithala, igrill kanye netafula lepikiniki ukuze ujabulele umbono omangalisayo.
Ikhabhinethi isendaweni yangasese eJuayua, eSonsonate, ngaphakathi kwepulazi, imizuzu emi-3 ukusuka edolobheni. Ikhabethe linemibhede yezindlovukazi ezimbili, igumbi lokugezela elinamanzi ashisayo, ikhishi, ithala, igrill kanye netafula lepikiniki ukuze ujabulele ukubuka okumangalisayo.
4.87 · 70 okushiwo abanye
Sincoma ukuthi ujabulele izoso ekhabetheni, ujabulele umcimbi we-gastronomic kamasipala noma uvakashele ezinye izindawo zokudlela zasendaweni:
Indawo yokudlela yase-Carbón y Leña. (2401-8767)
U-Sugey Pupusería (2469-2805)
"Baking Pizza" Ukulethwa kwasekhaya (2413-5356)
"Dragon of Juayúa" Ukudla kwaseShayina (2417-7257; 7471-2581)
Intombazane uTamales Bertita (7874-7755) - Kuphela ngesicelo ngoLwesihlanu nangeMigqibelo.
Iningi lezikhungo zitholakala ku-Facebook. Ungashayela ngocingo ukuze uhlole imenyu, amahora okuvula, indawo, phakathi kokunye.
Indawo yokudlela yase-Carbón y Leña (2401-8767)
"Baking Pizza" ukulethwa (2413-5356)
Intombazane uTamales Bertita (7874-7755) - Kuphela ngesicelo ngoLwesihlanu nangoMgqibelo
Ngizotholakala ngo-WhatsApp noma ngomakhalekhukhwini, ngaphezu kwalokho, endlini encane yomhlaba ongumakhelwane kukhona abanikazi bendawo kanye nomnakekeli ozobe elalele ukukweseka nganoma imiphi imibuzo onayo.
Ngizotholakala nge-WhatsApp noma ngomakhalekhukhwini, ngaphezu kwalokho, ekhabetheni elinamathiselwe kukhona abanikazi bendawo kanye nomnakekeli ozobe elalele ukukweseka nganoma imiphi imibuzo onayo.
Ngizotholakala ngo-WhatsApp noma ngomakhalekhukhwini, ngaphezu kwalokho, endlini encane yomhlaba ongumakhelwane kukhona abanikazi bendawo kanye nomnakekeli ozobe elalele ukukweseka…